ABOn jaarmiyaa qabsoo ummatni Oromoo wareegama guddaa itti baasee dha. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooABOn jaarmiyaa qabsoo ummatni Oromoo wareegama guddaa itti baasee dha.
Guraandhala 17, 2021
Ummatni Oromoo ABO sababa deggeruuf qaba malee namoota dhuunfaa ilaalee abaluukoo jechuuf miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn geggeefamaa jru keessatti jalqaba irraa ka’ee haga har’aatti gootota Oromoo hedduutu wareegama guddaa kafale. Qabsaawota baayyeetu manneen hidhaa keessatti waggootii hedduuf tumamaa fi itti roorrifamaa ture. Kan qaamaa hir’atanii lubbuun jiranis hedduu dha. Kan qe’én isaanii itti faca’ee itti deeganis balbala hedduu dha.
Bara 2014-2017tti sochii Qeerroo Oromoo godhamee mootummaa raasee ture keessattis warri qabamanii mana hidhaatti dararamaa turan maal jedhamanii akka yakkamaa turan, warra carraa argatanii du’a irraa hafanii mana hidhaatii hiikmanii jiran irraa ragaa argachuun danda’amaa dha. Kan biyya irraa baqatanii jiruu fi jireenya baqaaf saaxilamanii rakkachaa turanis sababa maliif akka ta’ee fi sababa maalii himachaa akka turanis isaan hundumtuu keessa isaaniitti beeku.
Ummatni bal’aan Oromoo gaaga’ama bifa kanaan dhala Oromoo irratti gahaa ture kana bifa adda addaatiin qooda keessaa qaba. Kanaaf ABO waliin kufee ka’aa akka jiru hubatamuu qaba
Bara mootummaa EPRDF waggootii 27 fi waggootii 3 sana booda jirus kunoo mana hidhaa keessa ummata Oromoo kumaatamaan dararamaa jiran keessaa irra guddaan miseensotaa fi deggertoota ABO ta’un ifaa dha.
Akka waliigalaatti siyaasni shiraan kan guutame ta’uyyuu dhugaa qabatamaan mul’atuus hubannaa argachuu qaba. Dhugaa dhoksaa dhugaaf dhaabbanna jechuun ofumas sobuu yoo ta’e malee bu’aa hundee qabu fiduu hindanda’u
Kan suuraa kana irratti argaman hoogganoota, qondaalota, miseensotaa fi deggertoota ABO mana hidhaa gartuu PP keessatti kumaatamaan yeroo ammaa kana dararamaa jiran keessaa muraasa.
Kanaaf dhugaa mul’ataa kana irra dhaabbannee tokkummaadhaan yoo qabsoofne akeeka qabsoo ummata Oromoo injifannoon akka xumuramu shakkiin hinjiru.
Wallee Qabsoo Haarawaaa 2019
1. Shimallis Abbabuu - 'Duru Barree Toftaashi' https://youtu.be/mERPpl82A8Q 2. Caalaa Birruu - 'Lafee Gootaa' https://www.youtube.com/watch?v=Iq3KQNR3zjo
Filannoo Biyyaalessaa Marsaa 6ffaa Irratti Paartiin KFO akka hin hirmaanne Dura Taa’aan Paartichaa ibse.